Ogaden News Agency (ONA) – Gumaysiga Itoobiya oo $3.5 Milyan Kubixiyay Sidii Hawada Looga Saari Lahaa TV-ga Mucaaradka uu Leeyahay ee ESAT TV.
Gumaysiga Itoobiya oo $3.5 Milyan Kubixiyay Sidii Hawada Looga Saari Lahaa TV-ga Mucaaradka uu Leeyahay ee ESAT TV.
Posted by ONA Admin	/ July 4, 2015
Gumaysiga Itoobiya ee faashiistaha ah oon waligii ka gaboobin cabudhinta iyo cunaqabataynta waxa loo yaqaano Xorriyatul-Qawlka (Freedom of Expression) ayaa kubixiyay aduun lacageed oo gaadhaysa $3.5 Million (Sadex iyo Badh Milyan oo Doolarka Maraykankan ka ah). Sida ay sheegayaan warar hoose oo nasoo gaadhaya Gumaysiga Itoobiya ayaa heshiis kula galay shirkad Shiinays ah oo kuhawlan arimaha carqaladaynta iyo tashwiishinta saxaafada. Itoobiya ayaa kubixisay lacag gaadhaysa $3.5 Million sidii hawada looga saari lahaa ESAT TV ooy leeyihiin mucaaradka axmaarada.
Talaabadan ay Itoobiya kutalaabsatay ineey ku xanibto hawadana kasaarto TV-gan oo aad looga daawado gudaha iyo dibadaba ayaan ahayn mid kucusub dhaqanka Gumaysiga Itoobiya oo kucaan baxay ladagaalanka saxaafada xorta ah ee kala gadisan. Kacdoon xoogan oo kajira gudaha Itoobiya taasoo keentay banaan baxyo waawayn iyo guux balaadhan oo kasoo yeedhaya shacabka kadib doorashadii dhawaan dhacday ooy hal xisbi waa RPRDF musuqeen natiijadii kasoo baxdayna axsaabta mucaaradka ahn ay ku gacan saydheen gabi ahaanba ayaa keentay in TV-gan hawada laga saaro si kacdoonka shacabku wado uusan usii xoogaysanin. Waxaa kaloo lasheegayaa in ciidamada amaanka iyo kuwa militarigu ay hawlgalo lagu waxyeelaynayo shacabka ay meelo badan oo wadanka dhexdiisa ah ay kawadaan.
Wararkan ayaa kusoo beegmaya wakhti ay Hay’daha Cunada Aduunka ee layidhaahdo Food And Agriculture Organization (FAO) ee kuhawlan kahortaga macaluusha iyo faqriga ineey warbixin ay dhawaan soosaartay ku sheegtay in kudhawaad 16 Million (Lix iyo Toban Milyan) oo Itoobiyaan ah ay soo foodsaartat macaluul daran sanadkan aan kujiro. Warbixintan oo lasiidaayay maalmo kahor ayey hay’aduhu waxay beesha caalamka kaga codsanaysaa in kaalmo banii’aadamnimo oo deg deg ah loofidiyo shacabka macaluushu ay kuhabsatay ee Itoobiya.
Waxaa iswaydiin mudan maxay tahay sababta Itoobiya ay oogu bixinayso $3.5 million sidii hawada looga saari lahaa TV mucaarad ah iyadoo 16 Million oo shacabka Itoobiya kamid ah ay macaluul darteed beesha caalamka gargaar loowaydiinayo? Jawaabta su’aashan iyo qaar kaloo badan ayaa aad loogu dhaliilay hab-dhaqanka Gumaysiga Itoobiya oo u biyo dhuratay inaysan dawladi wadanka maamulin balse ay talada wadanka ugacan gashay koox qawlaysato ah oon nidaam iyo shuruuc toona aqoonsanayn.